Posted by Tranquillus | Déc 16, 2020 | Shabakada
Qiyaasta SMIC 2021: koror ah 0,99%
Warbixintooda ay u gudbiyeen Wasiirka Shaqada bilowga Diseembar, khubaradu waxay ku talinayaan in lagu xadido kororka mushaharka ugu yar ee 2021 waxa loo qoondeeyay qoraalada lagana fogaado wax caawimaad ah. Marka loo eego shuruudahan, warbixinta ayaa si ku-meel-gaar ah u qiyaaseysa in kororku uu noqonayo 0,99%.
Intii lagu gudajiray faragalinta xarunta BFMTV, Diisambar 2, Jean Castex wuxuu kujawaabay in laga yaabo inaysan jirin wax kor uqaadaya mushaarka ugu yar. Wuxuu sheegay in dooda aan la joojin laakiin loo tixgelin doono koror u dhexeeya 1 iyo 1,2% ee mushaharka ugu yar.
Kordhinta mushaharka ugu yar ee 2021 waxaa ku dhawaaqay Gabriel Attal, oo ah afhayeenka dowladda markii uu ka tagay Golaha Wasiirada. Wax kor u qaadis ah laguma dhawaaqin inay qayb ka tahay kororka mushaharka ugu yar ee sanadka 2021 laftiisa.
2021 xaddiga mushaharka ugu yar: tirooyinka cusub ee la ogaanayo
Xaddiga mushaharka ugu yar ee 2020 waa 10,15 euro guud ahaan saacaddii, ama 1539,42 euro guud ahaan bishii.
Ka dib markii lagu dhawaaqay kororka 0,99% laga bilaabo Janaayo 1, 2021, mushaharka ugu yar saacaddii wuxuu ka bilaabmaa 10,15 euro ilaa 10,25 euro. Mushaharka ugu yar ee 2021 ...
2021 mushaharka ugu yar July 10th, 2021Tranquillus
READ Tallaalka shaqaalaha: helitaanka wuxuu ku kooban yahay dadka da'doodu u dhexeyso 55 ilaa 64 jir oo ay ka mid yihiin cudurro la wadaago
horeDadaallada: wejiga qarsoon ee shaqada
socdaKu dhiirrigelinta isboortiga goobta shaqada: ka-dhaafitaannada tabarucaadka bulshada ee uu qeexay sharciga maalgelinta Lambarka Bulshada ee 2021